China Steel Conveyor Rollers Manamboatra sy Factory | Joyroll
Conveyor rollers dia singa ao amin'ny rafitry ny conveyor fehikibo satria manome fanampiana amin'ny enta-mavesatra sy amin'ny lafiny miverina. Ny roller conveyor dia avo lenta ary natao mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Ny rojom-baravarana vita vita vita vita manokana dia azo alaina amin'ny fangatahana. JOYROLL dia manana fahaizana mamoaka karazana famolavolana manokana: roller porofon-drano, roller ho an'ny toe-piainana matanjaka, roller conveyor ho an'ny famatrarana fatratra, roller conveyor hafainganam-pandeha, fanodinam-peo ambany, fanodinam-bidy ho an'ny toe-javatra simika sy horonan-taratasy mafy.
SPECIFICATION:Roller Diameter: 50, 60, 63.5, 76, 89, 102, 108, 114, 127, 133, 140, 152, 159, 165, 178, 194, 219mm Halavan'ny mpamily: 100-2400mm. Diameteran'ny sambo: 20, 25, 30 , 35, 40, 45, 50mm Karazan-jaza: 6204, 6205, 6305, 6206, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310Fomba fitsaboana amin'ny alàlan'ny tarehy: Coating electrostatic Powder, Galvanization.Standard: DIN, CEMA, JIS, AS, SANS-SABS, GOST , AFNOR sns.
RAW MATERIAL OF ROLLERS:1.Pipe: fantsona manokana ERW avo lenta misy faribolana kely. Fitaovana Q235 mitovy amin'ny Europe S235JR2.Shaft: bara boribory voasoratra mangatsiaka avo lenta, Material 45 # mitovy amin'ny DIN C45.3.Bearing: fitaterana baolina lalina amin'ny alàlan'ny C3. Tombo-kase indroa, kilasy kalitao P5Z34.Bearing House: lovia vy mangatsiaka mangatsiaka, fitaovana 08AL mitovy amin'ny DIN ST12 / 145. Tombo-kase anatiny: tombo-kase molotra, Material nylon.6. Tombo-kase lyririnina: ny rafitra tombo-kase lehibe, nylon.7 Menaka: # 2 menaka manosotra maharitra, fepetra miasa -20 ° c hatramin'ny 120 ° c8. Fitsaboana amin'ny masonkarena: firakotra vovoka elektrostatik
TOETOETRA1. Low Total Indikator Run-out (TIR), fanoherana ambany fihodinana; 2. Tombo-kase labyrint mahomby be arovana amin'ny vovoka sy ny rano ao anaty fiterahana; 3. Namboarina sy novolavolaina nandritra ny androm-piainana tsy misy olana; 4. Fikolokoloana baolina tsy misy fikajiana, avo lenta.